Potentiometra namboarina namboarina niaraka tamin'ny lelan-tsolika sy pensilihazo - Ikkaro
firosoana >> elektronika >> Potentiometra vita an-trano miaraka amin'ny ravina sy pensilihazo
Potentiometra vita an-trano miaraka amin'ny ravina sy pensilihazo
Ho hitantsika ato amin'ity lahatsoratra ity Ahoana ny fomba hanaovana resistor miovaova ao an-trano (potentiometer) miaraka amina ravin-taratasy sy pensilihazo.
Izy io dia tsy misy afa-tsy ny hosodoko amin'ny taratasy misy pensilihazo, tarika grafita. Ho an'ity dia tsara kokoa ny mampiasa pensilihazo tena malefaka toy ny 2b (manomboka amin'ny 2b mankany ambony, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b), mba hamoahana grafita be dia be izay hamela ny herinaratra hotanterahina.
Avy eto dia tsotra ny zava-drehetra. Ohatra, ny LED dia ampifandraisina amin'ny faran'ny asantsika grafita ary amin'ny faran'ny iray ny bateria ho loharano herinaratra.
Ary raha liana isika dia afaka manao manao andrana amin'ny boriborintany samihafa vita amin'ny grafita.
Na dia tsy misy mino aza fa ireo tarika grafita ireo dia manao toy ny tariby varahina. Azontsika ampiasaina tsotra izao izy ireo mba hitondrana jiro kely, saingy sady tsy mahomby no tsy azo atao ny mampiasa boribory voasoratra amin'ny taratasy.
Raha te-hahita io andrana io miasa ianao dia manana ity horonantsary manaraka ity
Inona no atao hoe potentiometra
Ny potentiometra dia resistor na resistor miovaova, izany hoe fanoherana izay ahafahantsika manova ny sandany ao anatin'ny elanelan'ny mampiavaka azy.
Ny terminal dia misy (anode, base ary cathode) telo no mamorona azy ary axis hanovana ny sandan'ny fanoherana izay ahodin-tsika na ahodinantsika azy.
Manao baolina fingotra mandrehitra
Fanehoan-kevitra 12 momba ny "Potentiometra namboarina namboarina niaraka tamin'ny ravina sy penina"
8 Janoary 2012 amin'ny 10:58 hariva
Raha manao ny refitsika amin'ny refy isan-karazany d sakany isika (q dia misintona zavatra toy ny rojo na boribory nifandimby. Te hanana mpanohitra mifandraika ve ny q ary samy hafa ny lanjan'izy ireo? Misaotra betsaka, eny, hahaliana tokoa ny mahita ny fiovana d ny fanoherana amin'ny maha-fiasan'ny faritra azy
9 Febroary 2014 amin'ny 12:40 maraina
Niezaka aho ary tsy nety tamiko
9 Febroary 2014 amin'ny 12:41 maraina
afaka manampy ahy ve ianao